ကျောက်ဖြူက အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ကမန်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ရိုဟင်ဂျာတိုင်းရင်းသားတွေ အ စဉ် အဆက်နေလာခဲ့တဲ့ ရပ်ကွက်ကြီးတစ်ခုလုံးကို မီး နဲ့ဝိုင်းတိုက် အထူးစီးပွားရေးဇုံဆိုပြီး ဗိုလ်ချူပ်မှုးကြီးဟောင်းကြီးရဲ့ သားတွေသမီးတွေ အပြင် ဗီအိုင် ပီခရိုနီတွေက ၀င်ပြီး သူများတွေရဲ့ မျက်ရည်တွေပေါ်မှာ ကော်ဇောဝင်ခင်းသွားတာ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« ဘာသာရေး အမြင်ကျယ်မှုနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး litmus test လိုဖြစ်တဲ့ သီတဂူလို ဆရာတော်ကို ဝေဖန်ရင်ကျတော့ ရှူးရျူးရှားရှားတွေ ဖြစ်ကုန်ရော
၀ှိုက်ကတ်ကတ် (သို့မဟုတ်) ယာယီ သက်သေခံလက်မှတ် »
ကျောက်ဖြူက အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ကမန်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ရိုဟင်ဂျာတိုင်းရင်းသားတွေ အ စဉ် အဆက်နေလာခဲ့တဲ့ ရပ်ကွက်ကြီးတစ်ခုလုံးကို မီး နဲ့ဝိုင်းတိုက် အထူးစီးပွားရေးဇုံဆိုပြီး ဗိုလ်ချူပ်မှုးကြီးဟောင်းကြီးရဲ့ သားတွေသမီးတွေ အပြင် ဗီအိုင် ပီခရိုနီတွေက ၀င်ပြီး သူများတွေရဲ့ မျက်ရည်တွေပေါ်မှာ ကော်ဇောဝင်ခင်းသွားတာ
Genocide pays! Look at Myanmar generals and their slow genocide of Rohingya and Muslims in Rakhine or Arakan.
‪#‎Myanmar‬ regime, families and cronies reaping economic benefits of Death, Displacement and Destruction:
4000-acres of special economic zone in Kyauk Hpyu, Rakhine/Arakan, Western Burma or Myanmar
ကျောက်ဖြူက အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ကမန်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ရိုဟင်ဂျာတိုင်းရင်းသားတွေ အ စဉ် အဆက်နေလာခဲ့တဲ့ ရပ်ကွက်ကြီးတစ်ခုလုံးကို မီး နဲ့ဝိုင်းတိုက်၊ ရပ်ကွက်ကြီးထဲက မွတ်စ လင်မ် တွေကို ပင်လယ်ထဲမောင်းချ။ အဲ့ဒီမီးလောင်ပြင်ကြီးကို မြေတွေညှိလိုက်ပြီး အခုတော့ အဲ့ဒီ နေရာကို အထူးစီးပွားရေးဇုံဆိုပြီး ဗိုလ်ချူပ်မှုးကြီးဟောင်းကြီးရဲ့ သားတွေသမီးတွေ အပြင် ဗီအိုင် ပီခရိုနီတွေက ၀င်ပြီး သူများတွေရဲ့ မျက်ရည်တွေပေါ်မှာ ကော်ဇောဝင်ခင်းသွားတာပဲ။
အဲ့ဒီနေရာ တွေက လူတွေကတော့ ခုထိ ဒုက္ခသည်စခန်းဆိုတဲ့ ညှဉ်းပမ်းနှိပ်စက်ရေး ငရဲခန်းတွေထဲမှာ နေ နေကြရတုန်း။ စစ်တွေမြို့ထဲနဲ့၊ မြို့ဟောင်းမောလိပ်က ရိုဟင်ဂျာတွေ၊ ကမန်တွေရဲ့ မီးတိုက်ခံ နေရာတွေမှာလည်း ဒါမျိူးလုပ်ဖို့ အခုကြံစည်နေကြတယ်။
Htin Kyaw added2new photos.
ဧက ၄ ၀၀၀ ကျောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဇုံ
(ဓာတ်ပုံ – နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ Human Rights Watch (HRW ) က ဂြိုဟ်တုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ထားသော ဓာတ်ပုံဖြစ်သည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ် အကြမ်းဖက်မှုများအတွင်းကျောက်ဖြူ မွတ်စလင်မ် ရပ်ကွက် များအား ၂၀၁၂ခုနှစ်၊ အောက်တို ဘာလ ၂၃ ရက်နေ့ တွင် စတင်မီးမတိုက်ခဲ့မီ နှင့် ထိုနေ့စွဲ နောက်ပိုင်း မီးတိုက်ခဲ့အပြီး တွေ့ရပုံ ကွာခြားချက်ဖြစ်သည်။
ယခု ထိုမြေနေရာများမှ အိမ်ရှင်များမှာ ဒုက္ခသည်စခန်းများတွင်း ရောက်နေကြရပြီး ၎င်းတို့ပိုင် ဆိုင်သော မြေနေရာများပေါ်တွင် ခရိုနီများက ဥပဒေမဲ့ ၀င်ရောက်ရင်းနှီးမြှပ်နှံကြပြီး အထူးစီးပွား ရေးဇုံ၊ ဘာဇုံ၊ ညာဇုံ စသည်ဖြင့် ထင်သလိုအနိုင်ကျင့်နေကြသည်ကိုလည်း
မည်သို့မျှမတတ်နိုင် ဘဲ ဒီတိုင်းသာ ထိုင်ကြည့်နေကြရသည့် အနေအထားဖြစ်သည်။ )
This entry was posted on February 8, 2015 at 6:00 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.